AP Exam Test Site Security (Somali) – AP Test Service
AP Exam Test Site Security (Somali)
Xeerarka Ammaanka Goobta Imtixaanka AP ee PPS
Macluumaad loogu talagalay ardayda iyo waalidiinta Dugsiyada Sare ee Dadweynaha Portland
Maamulka Imtixaanka AP ee 2018-ka
FADLAN AKHRI MACLUUMAADKA MUHIIMKA AH EE SOO SOCDA EE LOOGU TALAGALAY IMTIXAANNADA AP
TAARIIKHAHA IMTIXAANKA: Maajo 7-11 iyo 14-18
Imtixaanka subaxda: WAXAAD TIMAADA 7:15 subaxnimo; Waqtiga qaabilaadu wuxuu bilaabmayaa 7:30 subaxnimo
Imtixaanka galabtii: WAXAAD TIMAADA 11:15 subaxnimo; Waqtiga qaabilaadu wuxuu bilaabmayaa 11:30 subaxnimo
Imtixaannada waa in la soo gabagabeeyaa qiyaastii 11:45 (u fadhiisiga subaxda) iyo 4:00 oo ah (u fadhiisiga galabtii). Ardayda looma oggola in ay waqti hore ka baxaan wixii imtixaan ah ee ay leedahay AP.
GOOBTA: Dhammaan imtixaannada AP waxay ka dhici doonan Xarunta Shirarka ee Oregon, 777 NE Martin Luther King Jr Blvd, Portland OR 97232, marka laga reebo imtixaannada AP Chinese iyo AP Japanese kuwaasi oo ka dhici doonaa Dugsiga Sare ee Benson, 546 NE 12th Ave, Portland, OR 97232.
MEESHA GAWAARIDA LA DHIGTO: WAXAAN SI AAD AH UGU TALINAYNAA in ardayda:
~ Meesha Lagu Dejiyo
~ Isticmaalaan gaadiidka dadweynaha ee TriMet: MAX, Bus, Streetcar (https://trimet.org/)
~ Gaari soo wada raacaan
HADDII BAABUUR LA WADO ISLA MARKAANA MEEL DHIGANAYO, garaashka ku yaala Xarunta Shirarka ee Oregon, ardaydu waxay heli doonaan foojar loogu talagalay dhigashada gawaarida oo lacag la’aan ah marka ay dhameeyaan imtixaankooda.
HA U SOO QAADAN: Telefoonada gacanta, Saacadaha casriga, iPod-yada, MP3, wixii qalab elektaroonig ah, ama jeex warqadeed ah imtixaankaaga(imtixaannadaada) AP.
TELEFOONADA GACANTA: Guddiga Kulliyaddu waxay mamnuucaysaa in telefoonada gacanta ama mid kasta oo ka mid ah qalabka elektarooniga ah ee kor ku xusan loo soo qaato qolka imtixaanka, qof ahaan loo haysto, ama la isticmaalao inta lagu jiro biririfta/nasashada. Qalabkani waxaa gacanta lagaga ridi doona shaqaalaha AP ka hor inta aan la gelin goobta imtixaanka, waxaana la isku soo celin doonaa dhammaadka imtixaanka. Haddii uu arday qalabkan elektarooniga ah ku isticmaalo qolka imtixaanka ama inta lagu jiro biririfta/nasashada, waa lagala wareegi doonaa waxaana laga yaabaa in ardayga laga saaro imtixaanka. Haddii uu telefoon dhaco, gariir sameeyo, iwm. inta lagu jiro imtixaanka, waxaa laga yaabaa in ay joojiso imtixaanka QOF KASTA oo ku sugan qolka imtixaanka. Halis ha is gelin!
QADADA/CUNTADA FUDUD: Imtixaannada galabtii, ardayda waxaa laga filayaa in ay qadada cunaan ka hor waqtiga qaabilaada ee 11:30 subaxnimo. Waxaa fiican in aad soo qaadato qado haddii aad leedahay 2 imtixaan isku hal maalin. Haddii aad qaadanayso hal imtixaan oo kaliya, fadlan soo qaado cunto fudud iyo biyo/cabitaan. Waxyaalahan labadooduba waa in ay ku jiraan bacda ‘Ziploc’ (oo gooni ka ah boorsoosadaada dhabarka/boorsadaada caadiga ah) waxaana la dhigi doonaa kursigaaga hoostiisa. Ma heli doontid wax cunto ama cabitaan ah inta lagu jiro imtixaanka marka laga reebo waqtiga biririfta/nasashada ama ama ka dib marka imtixaanku si rasmi ah u dhammaado.
BOORSOOYINKA DHABARKA/BOORSOOYINKA CAADIGA AH: MA heli doontid waxyaabahani waqti kasta inta lagu jiro imtixaanka, oo ay ku jiraan waqtiyada biririfta/nasashada.
MAQNAANSHAHA: Waxaa lagaa filayaa in aad joogto dhammaan imtixaannada AP ee aad dhammeystirtay isku diiwaangelintooda. Haddii aad imtixaanka uga maqnaato sababo ay oggolaatay Guddiga Kulliyadda, waxaa laga yaabaa in aad awoodo in aad qaadato imtixaan dambe oo aanan lahayn kharash dheeraad ah oo la bixinayo. Haddii sababta maqnaanshahaagu uusan ku jirin liiska sababaha la oggolaaday ee Guddiga Kulliyadda, waxaa laga yaabaa in laguu oggolaado in aad qaadato imtixaan dambe, laakiin waxaa laguu qiimeyn doonaa $ 45 oo ah lacagta ka soo daahida imtixaanka. Waa in aad la hadashaa Isku duwaha AP ee dugsigaaga sare si uu diyaariyo in la qaato imtixaan DAMBE. Dhammaan ka maqnaanshaha imtixaannada AP waxaa lagu wargelin doonaa dugsigaaga sare.
HAB DHAQANKA: Ardayda waxaa laga filayaa in ay muujiyaan hab dhaqan tusaale ah inta lagu jiro imtixaannada. Ku guuldareysiga in la raaco dhammaan xeerarka dugsiga iyo AP inta lagu jiro imtixaanka iyo inta lagu jiro biririfta/nasashada waxaa laga yaabaa in ay keento in lagaa saaro goobta imtixaanka isla markaana ansax noqon waayo.
WAXA LOO SOO QAADANAYO IMTIXAANKA:
Sawirkaaga aqoonsiga (Kani wuxuu noqon karaa sawir aqoonsi oo ay dowladda ama dugsigu bixiyeen)
Ugu yaraan 2 qalin qori oo afaysan oo ah qalin qoriga lambarkoodu yahay # 2 oo ay la socdaan tirtirayaal ‘erasers’.
Ugu yaraan 2 ah qalinka khadka leh oo midabka khadkoodu yahay madow ama buluug madow xigeen ah oo loogu talagalay qoritaanka jawaabaha
Xisaabiye garaaf leh oo loogu talagalay Biology-ga, Calculus AB/BC, Chemistry-ga, Physics-ka, iyo Xisaabaadka imtixaannada iyada oo la adeegsanayo tilmaamaha la raacayo ee xisaabeyaha ee laga helayo http://www.collegeboard.com/ap/calculators. Ardaydu waxay soo qaadan karaan 2 xisaabiye, laakiin looma oggola in ay dadka la wadaagaan xisaabiyeyaasha inta lagu jiro imtixaanka. Xaqiiji in ay wataan baateriyo cusub.
Cunto fudud/cabitaan ku jira bacda ‘Ziploc’ oo gooni ka ah boorsada dhabarka/boorsada caadiga ah
Ha ilaawin in aad soo qaadato sawir aqoonsi!
AP Exam General Information and Policies (Somali)